दु:खद खबर : आज एकै दिन कोरोना बाट ९ जनाको मृत्यु ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/दु:खद खबर : आज एकै दिन कोरोना बाट ९ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । नेपालमा आज थप ९ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या २ सय ८० पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा आज ४०८ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । काठमाडौँमा ३२७, ललितपुरमा ३७, भक्तपुरमा ४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४१ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । योसँगै ४५ हजार २ सय ७७ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै १ हजार ५ सय ६६ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म २७१२७ जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा आजसम्म १७८७० सक्रिय संक्रमितहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म देशभर ८ हजार ४ जना होम लाइसोलेसनमा रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आज १२४७३ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौँमा आज ३ सय २६ जना संक्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।